“Maamulka Siilaanyo dulmi aan qarsoonayn ayay ku soconayaan, in la iska difaacaana waajib weeye” Culimada gobolka Cayn. – Radio Daljir
“Maamulka Siilaanyo dulmi aan qarsoonayn ayay ku soconayaan, in la iska difaacaana waajib weeye” Culimada gobolka Cayn.
Buuhoodle, Feb 22 – Culimada ayaa shir jaraa’id oo ay ku qabteen magaalada Buuhoodle kaga dayriyey cawaaqib xumida colaadda ka aloosan deegaanada Kalshaale, Hagoogane & Maygaagle oo ka tirsan gobolka Cayn.
Sh. Sulaymaan Maxamed Jamac oo saxaafada u akhriyey qoraal ay si wadajir ah u soo saareen qaar ka mid ah culimada gobolka Cayn ayaa ay ku dhalleeceeyeen weerarada ciidanka Somaliland ay ku hoyaan dadka shcabka ah ee gobollada Sool & Cayn.
Culimada ayaa ugu baaqay maamulka Somaliland in uu joojiyo xasuuqa shacabka, ciidamadiisana uu kala baxo gobollada Sool & Cayn.
“Waxaan baaq u soo jeedinaynaa xukuumada Siilaanyo in ay ka joojiso dadka Muslimka ah ee ay ku laynayso guryahooda iyo xorriyadooda ee ay xasuuqayso; ciidamdeedana in ay kala baxdo ayaan baaq ugu soo jeedinaynaa” ayaa uu dhigayaa baaqa culimadu.
Culimada ayaa sidoo kale ku baaqay in gargaar loo fidiyo shacabka gobolka Cayn ee ay colaaddu dul hoganayso.
“Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka Muslimka ah, eer riximka ah ee reer Buuhoodle iyo intii ay damqayso dhibaatada shicibka lagu hayo, iyo xasuuqa lagu hayaaba in ay difaacaan naftooda, dadka abriyada ah ee Muslimka ah ee aan waxba galabsan, guryahooda lagu laynayo, iyo hantidoodii iyo ceelashoodii lagu laynayo, ee beebaha iyo kaaraha la marinayo, in qofkii Islam ahi uu ka damqado, oo ka difaaco, waajibna ay inagu tahay nafteena, maalkeena iyo cirdigeena inaynu difaacano, oo arintaa xasuuqa ah laga wada dhiidhiyo dar Illaah iyadoo loola jeedo, oo ayan bannanayn in laga aamuso maanta, in laga gamca-haystaana aanay bannaanayn …” ayaa ka mid ahaa baaqa culimada.
Culimadu waxaa ay sheegeen in dagaalka ay Somaliland ka wado gobollada Sool & Cayn ay yihiin dulmi, in la iska difaacaana ay waajib tahay.
Malyuun Axmed Xasan,